โครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงามข้ามชาติ | มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
admin | มีนาคม 25, 2020 | News | No Comments
CFP No. CFP-CSO-2020-001
มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(ADRA) ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(HRDF) กำลังดำเนินโครงการที่ชื่อว่า “โครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงามข้ามชาติ” โครงการนี้เป็นโครงการระยะเวลา 36 เดือน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรประชาสังคม(CSOs) ในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องผลักดันเชิงนโยบายด้านสิทธิแรงงาน/สิทธิมนุษยชน และสภาพการทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง,จังหวัดตาก, ประเทศไทย
โครงการวางแผนที่จะทำงานร่วมกับองค์กรประชาสังคมสามองค์กร(CSOs) และองค์กรชุมชน (CBOs) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ต่อไปนี้:
(2) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรประชาสังคม(CSOs) ให้มีส่วนร่วมในเวทีการเจรจานโยบายและเครือข่ายเพื่อสิทธิของเรงงานข้ามชาติและการเรียกร้องผลักดันเชิงนโยบาย
(3) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาสังคม(CSOs) หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานเละสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ้นสำหรับแรงงานข้ามชาติ
ขณะนี้ มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(ADRA) และ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(HRDF) กำลังเปิดรับข้อเสนอ(Proposal) จากองค์กรประชาสังคม(CSOs) และองค์กรชุมชน(CBOs) ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของข้อเสนอนี้
องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และมุ่งเน้นการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการมีส่วนร่วมของเยาวชน หรือ/และการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย
มีการประเมินความสามารถในการคืนเงินให้แก่ มูลนิธิแอ๊ดเวนเตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ได้ หากองค์กรที่เข้ามาเป็นพันธมิตรนั้นไม่สามารถพิสูจน์ค่าใช้จ่ายด้วยคำอธิบายและหลักฐานเอกสารอย่างเพียงพอ
การบรรจบกันระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ และขององค์กรประชาสังคม (CSOs) ผู้ร่วมมือ และประสบการณ์ของพวกเขาในการดำเนินการกิจกรรม จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการเลือกพันธมิตร
องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ที่สามารถเตรียมใบสมัครได้ตามแนวทางของข้อเสนอโครงการ Call for Proposal ที่โฆษณาในเว็บไซต์ Thai NGO
องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ที่เคยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคระหว่างประเทศ (เช่นองค์กรระหว่างประเทศ, หน่วยงานของสหประชาชาติ, องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ) และรู้จักกับโครงการและระบบการจัดการทางการเงินของผู้บริจาคระหว่างประเทศ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาแต่มิใช่เกณฑ์การบังคับ
ความพยายามที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระดับองค์กรหรือชุมชนที่จะได้รับการแก้ไข จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา แต่มิใช่เป็นเกณฑ์การบังคับ
พันธมิตรที่หนึ่ง ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 1)
งบสนับสนุน: 50,000 EUR
กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: แรงงานข้ามชาติ 1,000 คน (ผู้หญิง 50%) ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
กิจกรรมที่เสนอ: i) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติในการเป็นตัวแทนของพวกเขาก่อนจะมีการส่งต่อไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ii) รับความช่วยเหลือและข้อแนะนำเชิงเทคนิคจากที่ปรึกษากฎหมายพิเศษสำหรับคดีที่มีความซับซ้อน iii) ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียมให้ข้อมูลในหมู่แรงงานข้ามชาติ iv) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่แรงงานข้ามชาติเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, การพิมพ์, การแปลและอื่นๆ v) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเขียนกรณีศึกษา vi) ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการร่วมกันกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ ในการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงผสมผสาน vii) ให้การสนับสนุนระบบการส่งต่อความช่วยเหลือ viii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น
พันธมิตรที่สองที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: การเสริมพลังเยาวชน (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 2)
งบสนับสนุน: 40,000 EUR
กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: เสาะหาและสร้างศักยภาพให้กับ “สุดยอดเยาวชนเพื่อทำงานด้านการรณรงค์” จำนวน 8 คน เพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายผู้ย้ายถิ่นและด้านสังคม
กิจกรรมที่เสนอ: i) ดำเนินการสำรวจในหมู่เยาวชนข้ามชาติเพื่อประเมินความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตลอดจนประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น ii) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างพลังของเยาวชน iii) จัดโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินกิจกรรม iv) จัดทำชุดเครื่องมือสนับสนุนสำหรับเยาวชนเพื่อสนับสนุนในประเด็นเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ, เพศและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเสวนาเชิงนโยบาย v) จัดทำเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่แจ้งองค์กรประชาสังคม (CSOs) และเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับความท้าทายที่เด็กและเยาวชนอพยพต้องเผชิญ vi) จัดกิจกรรมสาธารณะหนึ่งกิจกรรมที่เน้นประเด็นเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก vii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น
พันธมิตรที่สามที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: การส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 3)
จำนวนพันธมิตรที่จะได้รับการคัดเลือก: : 1
กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยแก่แรงงานข้ามชาติ 3,500 คน และอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานข้ามชาติ 500 คน
กิจกรรมที่เสนอ: i) จัดกิจกรรมลงพี้นที่เพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเด็นด้านสิทธิแรงงาน นโยบายและกฎหมาย ii) ฝึกอบรมเพื่อนผู้สอน (Peer Educators) เพื่อที่จะสามารถให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติได้ iii) พัฒนาและแปลคู่มือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัย iv) จัดรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของแรงงานข้ามชาติ v) การจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน vi) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจกรรม“ผ่านสายตาของเธอ” และจัดทำหนังสือพับเล่มเล็ก จำนวน 1,000 เล่ม เกี่ยวกับชีวิตของแรงงานข้ามชาติสตรีในอำเภอแม่สอด vii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น
หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดส่งคำขอคำชี้แจง ไปที่ CSO–selection@adrathailand.org ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563
มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์จะขอตอบ สำหรับการชี้แจงเอกสาร CFP ที่ได้รับภายในวันที่กำหนด ภายในวันที่3เมษายน 2563 คำตอบจะถูกโพสต์ที่ www.adrathailand.org โดยไม่ระบุแหล่งที่มาของการสอบถาม
ก่อนถึงกำหนดส่งข้อเสนอ อาจจะด้วยเหตุผลใดๆ ไม่ว่าจะเหตุผลของมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์เอง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของผู้ที่ต้องการจะสมัคร มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ อาจจะมีการแก้ไขเอกสาร CFP ผู้ที่สนใจจะสมัคร และได้รับเอกสาร CFP จะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการแก้ไขเอกสาร CFP ทั้งหมด สำหรับการแข่งขันแบบเปิด การแก้ไขทั้งหมดจะถูกโพสต์บนแหล่งโฆษณา
เพื่อให้ผู้สนใจมีเวลาอย่างเหมาะสมในการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอของตัวเอง มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) อาจขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอตามดุลยพินิจของ มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์
ใบสมัคร/ข้อเสนอ ควรกรอกเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและแบบงบประมาณได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7E–w9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing
ใบสมัคร/ข้อเสนอ ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และปฏิบัติตามแบบฟอร์ม ใบสมัครและแบบงบประมาณที่แนบมา โปรดส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปที่ CSO–selection@adrathailand.org ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563
วันที่ตัดสินตามแผน: 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2565
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) ခေါ်ယူခြင်း
CFP No. CFP–CSO– 2020–001
အက်ဒရာ – Adventist Development and Relief Agency (ADRA) ထိုင်းနိုင်ငံရုံးနှင့် လူ့အခွင့်အ ရေးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ( HRDF) တို့မှ “ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့၏ အခွင့်အရေးများမြှင့် တင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဖွံ့ဖြိုးရေး” “CSO Development for the Promotion and Advancement of Migrant Rights” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စီမံချက်တစ်ရပ်ကို အကောင်အ ထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည် ။ ဤစီမံချက်သည် ဥရောပသမဂ္ဂ ( the European Union ) မှငွေကြေးရံပုံ ငွေထောက်ပံ့ရန် စုစုပေါင်း (၃၆) လ ကြာမည့် စီမံချက် ဖြစ်သည် ။ စီမံချက်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ နှင့် မယ်ဆောက်ဝန်းကျင်ဒေသတ၀ိုက်ရှိ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတို့၏ လူ့အခွင့်အရေး/အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာ စေရန် ထိရောက်စွာရှေ့ဆောင်ကူညီနိုင်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အချင်း မြှင့်တင်ပေးသွားရန် ဖြစ်သည်။
ဤ စီမံချက်အစီအစဉ်သည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (CSOs) နှင့် လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း (CBOs) (၃) ဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ရလဒ်များရရှိရန်အတွက် မတူကွဲပြားသောလုပ်ငန်းစဉ် များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်သည် ။
၁။ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပစ်မှတ်အုပ်စုအဖြစ်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအ ကြား အလုပ်သမားဥပဒေများကို သဘောပေါက်နားလည်လာစေရန် အသိပညာပေးလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
၂။ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ် သမားရေးရာကွန်ယက်များ၊ မူဝါဒပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာကွန်ယက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရာလုပ်ဆောင်ရာတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း – CSO တို့၏ အရည်အချင်းတိုးတက်မြှင့်မားလာစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင် သွားရန်။
၃။ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ လူ့အခွင့်အရေး/ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတိုးတက်မှုရရှိစေရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ ၊ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာကဏ္ဍများအကြား ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား၊ အားကောင်းသန်မာလာစေရန်။
ဤစီမံချက် အဆိုပြုလွှာ (CFP) ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မည်သည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ( CSOs) နှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း (CBOs) များမဆို တင် သွင်းလာမည့် အဆိုပြုလွှာများကို မိမိတို့ အက်ဒရာ (ADRA) နှင့် HRDF တို့မှ ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပါသည်။
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်ငွေကြေးရံပုံငွေတောင်းခံရယူရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံ ။ ။
ဥပဒေအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) လူငယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအတွက်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း စသည့် လုပ်ငန်းတို့ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေသော ၊ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်ရှိထားသော (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးသော ဒေသအခြေပြုအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း
( CSOs) နှင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း (CBOs) များ ဖြစ်ရမည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအသိုင်းအ၀န်းအကြားထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ပေးခဲ့သော ၀န်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းသမိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြေရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ရ မည်။
မဲဆောက်နှင့် မယ်ဆောက်ဒေသ၀န်းကျင်ဧရိယာအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် နယ်မြေရှိသော CSOs နှင့် CBOs များ ဖြစ်ရမည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၊ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု နှင့် ထိရောက်သောဘဏ္ဍာရေး အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကျင့်သုံးနေခြင်း ရှိရမည်။
လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အကယ်၍ အသုံးစရိတ်များကို လုံ လောက်သည့်ဖြေရှင်းချက်နှင့် အထောက်အထားများကို ပြသရန်ပျက်ကွက်ပါက ADRA သို့မဟုတ် HRDF ထံသို့ ရံပုံငွေကို ပြန်အပ်နိုင်သည့် အရည်အချင်းကိုလည်း သုံးသပ်မည်။
နည်းပညာအထောက်အပံ့များ အကူအညီရယူရန်အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထားနိုင်မည့် အဖွဲ့အ စည်းဖြစ်ရမည်။
စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည့် CSOs / CBOs အတွက် သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများ ။ ။
အဆိုပြုတင်သွင်းမည့်လျှောက်လွှာများကို၊ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် လိပ်စာသို့ သတ်မှတ် ရက်မတိုင်မီ တင်သွင်းရမည် ။
မိမိတို့ ချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားမည့် စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ၄င်းတို့ အဆိုပြုထားသောလုပ်ငန်းအား အကောင်ထည်ဖေါ်မှု အတွေ့အကြုံတို့ကို ကိုက်ညီတူညီမှု ရှိခြင်းသည်၊ ဤအဆိုပြုလွှာအတွက် CSO တို့ကို ရွေးချယ်စိစစ်ရာတွင် အဓိကအရေးပါသည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ NGO website သို့ အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူရန် ကြော်ငြာချက်တွင်ပါရှိသော လမ်းညွှန် ချက်များအတိုင်း CSO/CBO များအနေဖြင့် လျှောက်လွှာကိုရေးသားတင်သွင်းနိုင်ရမည် ။
CSO/CBO များ၏ နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များထံမှ ထောက်ပံ့မှု (ဥပမာ – နိုင်ငံတကာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ၊ အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း – INGOs) လက်ခံရရှိဖူးသည့်အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ လုပ်ငန်း စီမံချက်/ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲ မှုတို့နှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုတွင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိနေခြင်းတို့သည်၊ အဆိုပြုလွှာစိစစ်ရွေးချယ်သည့်အချိန်တွင် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကဏ္ဍအချက်တစ်ခု သာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငြားလည်း မဖြစ်မနေရှိရမည့် စံသတ်မှတ်ချက် မဟုတ်ပါ။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအ၀န်းအကြားတွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း၊ ကျား/ မတန်းတူညီမျှရေးအတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများရှိနေခြင်းစသည့်အချက်သည် အဆိုပြုလွှာရွေးချယ်စိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ကဏ္ဍ (အချက်) တစ်ခုသာဖြစ်မည်။ သို့သော်မဖြစ် မနေရှိရမည့် စံသတ်မှတ်ချက် မဟုတ်ပါ။
အဖွဲ့အစည်း၏စွမ်းရည်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်စွမ်းရည်သည် မိမိတို့ အဆိုပြုတင်သွင်းထား သောလုပ်ငန်းစဉ်အဆိုပြုလွှာကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်သည့် အရည်အချင်းကိုပြသနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်။
ဦးတည်ထားသောအုပ်စုနှင့် အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုချင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ။ ။
ငွေကြေးရံပုံငွေလျှောက်ထားရယူမည့် လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ (၁) ။ ။ ရွေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများအား အမှုအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီပေးခြင်း။ (လုပ်ငန်းစဉ် ရလဒ် (၁) အား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။)
စိစစ်ရွေးချယ်မည့် လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အရေအတွက် ။ ။ ၁ ဖွဲ့။
ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမည့် ငွေပမာဏ ။ ။ ယူရို ၅၀၀၀၀ (50,000 EUR)
အကျိုးခံစားရမည့် ပစ်မှတ်ထားသည့်အုပ်စု ။ ။ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ဦး (အမျိုးသမီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း) မှ ဥပဒေအထောက်အကူပြုအကူအညီ လက်ခံရရှိရန်။
အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ ။ ။ ၁) ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အမှုကိစ္စများကို အလုပ်သမား ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုံးနှင့် အခြားပတ်သက်ဆက်နွယ်သော အာဏာပိုင်များထံသို့ အမှုမတင်သွင်းမီ ကာလတွင်၊ ၄င်းတို့ကိုယ်စား ဥပဒေကြောင်းအရ အမှုအတွက် ကူညီထောက်ပံမှုပေးခြင်း၊ အားပေး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း (counseling)နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ။ ၂) ရူပ်ထွေး သောအမှုကိစ္စများအတွက် အထူးကျွမ်းကျင်သော ဥပဒေအကြံပေးများ၏ နည်းပရိယာယ်/ပညာ အ ထောက်အကူပြုမှုရယူခြင်း ။ ၃) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြား အသိပညာပေးကွင်းဆင်း လုပ် ဆောင်ခြင်း။ ၄) ခရီးစရိတ်၊ မိတ္တူကူးခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း စသည့် ကုန်ကျစ ရိတ်တို့ကိုပေးဆောင်နိုင်ရန် အမှုရင်ဆိုင်နေရသည့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ငွေကြေးတိုက် ရိုက်အကူအညီပေးခြင်း။ ၅) နည်းပညာရှင်များ ဌားရမ်းပြီး အမှုသွားအမှုလာအကြောင်းအရာ (case study) များရေးသားထုတ်ဝေခြင်း။ ၆) အက်ဒရာ (ADRA) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အရပ်ဖက် နှင့် ဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက် အကူအညီပေးခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ အဆင်ပြေ ချောမွတ်စေရန်တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၇)အမှုလွှဲပြောင်းခြင်းစနစ်အားထောက်ပံ့ရာတွင်ကူညီဆောင်
ရွက်ပေးခြင်း။ ၈) မိမိနယ်မြေဒေသအတွင်း ပြဿနာအသစ်များနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပါက ယင်းအ ခက်အခဲအားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအစီ အစဉ်အသစ်ပြန်လည်စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။
ငွေကြေးရံပုံငွေလျှောက်ထားရယူမည့် လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ (၂) ။ ။ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင် ရေး (လုပ်ငန်းစဉ် ရလဒ် (၂) အား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။)
ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမည့် ငွေပမာဏ ။ ။ ယူရို ၄၀၀၀၀ (40,000 EUR)
အကျိုးခံစားရမည့် ပစ်မှတ်ထားသည့်အုပ်စု ။ ။ စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်မှုအရေးကျွမ်းကျင်သည့်စံပြလူငယ်
(၈) ဦးအား စိစစ်ရွေးချယ်၍စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရေးလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားနှင့်လူ မှုရေးပေါ်လစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွား ရန်။
အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ ။ ။ ၁) ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဥပဒေနှင့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလက်မှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းအပါအ၀င် ယင်းကိစ္စများက ၎င်းတို့အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကို ရွှေ့  ပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်၏ နားလည်သဘောပေါက်မှုအား ဦးဆောင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း ။ ၂) လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ရန် အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲတစ်ကြိမ်ကျင်းပလုပ်ဆောင်ခြင်း ။၃) လူငယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လှုပ်ရှားမှုပုံစံနှင့် အကောင် ထည်ဖော်မှုပုံစံရေးဆွဲရန် လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်း ။ ၄) ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွင် ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနိုင်ရန်နှင့် လူငယ်များမှမူဝါဒရေးရာစကားဝိုင်းများသို့ ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရပြီး စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ရေး လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန်အတွက် လူငယ်များအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွန်စာအုပ်ထုတ် ဝေခြင်း။ ၅) ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်များ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို အရပ် ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်းများထံသို့အသိပေးအကြောင်းကြားနိုင်ရန် လူမှုမီဒီယာ (ဆိုရှယ်မီဒီယာ) ဆိုင်ရာ အသုံးပြုမည့်လမ်းညွန်ချက်ထုတ်ဝေခြင်း။ ၆) လူငယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို နားလည်သဘောပေါက်မှု မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အများပြည်သူကြားအာရုံ စူးစိုက်မှုရစေမည့် အခမ်းအနားလှုပ်ရှားမှုတစ်ကြိမ်ကျင်းပလုပ်ဆောင်ခြင်း ။ ၇) မိမိနယ်မြေဒေသအ တွင်း ပြဿနာအသစ်များနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပါက ယင်းအ ခက်အခဲအားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ် ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသစ် ပြန်လည်စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။
ငွေကြေးရံပုံငွေလျှောက်ထားရယူမည့်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ (၃) ။ ။ ကျန်းမာရေးနှင့်တကိုယ် ရည်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေး (လုပ်ငန်းစဉ် ရလဒ် (၃) အား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။)
အကျိုးခံစားရမည့် ပစ်မှတ်ထားသည့်အုပ်စု ။ ။ ကျန်းမာရေးနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ မြှင့် တင်ရေးအတွက် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ ၃၅၀၀ အကြား အသိပညာပေးမှု လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ ၅၀၀ အား အခြေခံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထောက် အကူပြုကာကွယ်မှုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့သွားရန်။
အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ ။ ။ ၁) အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေး ကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ (Occupational Safety and Health Act) အ ကြောင်းများကို ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြား အသိပညာပေးစကားဝိုင်းအား ကွင်းဆင်းလှုပ် ရှားမှုများကျင်းပလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ။ ၂) ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြား အသိပညာပေးလုပ် ဆောင်နိုင်ရန် အသိပညာလှုံဆော်သင်ကြားပေးနိုင်သူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။ ၃) လုပ် ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ဘာ သာပြန်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်း ။ ၄) ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားကျန်းမာရေးနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး စွမ်းအားမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်မှုအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု (Campaigns) များ ကျင်းပ လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ၅) အခြေခံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကာအကွယ်အသုံးဆောင် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်း ။ ၆) “သူမမျက်ဝန်းမှတဆင့်” (Through Her Eye ) စာစောင်ထုတ်ဝေမည့် လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပလုပ်ဆောင်ပြီး၊ ၎င်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့် မဲဆောက် ဒေသတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အမျိုးသမီးများ၏ ဘ၀အကြောင်းကို ထင်ဟပ်စေမည့်စာစောင် အစောင်ရေ ၁၀၀၀ ထုတ်ဝေခြင်း ။ ၇) မိမိနယ်မြေဒေသအတွင်း ပြဿနာအသစ်များနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ ကြုံရပါက ယင်းအခက်အခဲအားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ် ထပ်မံဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသစ် ပြန်လည်စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။
မရှင်းလင်းသည့်အချက်များရှိပါက မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ရန်အတွက် ယခုဖော်ပြထားသော အီးမေလ်း လိပ် စာ <CSO-selection@adrathailand.org> သို့ တိုက်ရိုက်လိပ်မူပြီး ဆက်သွယ်ပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။ မိမိတို့ မေးမြန်းလိုသောမေးခွန်းအချက်အလက်များပေးပို့ရာတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက် ထက်နောက်မကျစေဘဲပေးပို့သွားရန်။
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာအား မရှင်း လင်းသည့်အချက်နှင့် မေးခွန်းမေးမြန်းမှုများအတွက် ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်များကို၊ အက်ဒရာ (ADRA) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၃) ရက် ထက် နောက်မကျစေပဲ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားပါမည်။ ထိုသို့ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များကို မေးမြန်းသူ၏ အမည်ကိုဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ www.adrathailand.org တွင် တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပြုလွှာတင်မည့်သူ၏ မရှင်းလင်းသည့်အချက်များမေးမြန်းစုံစမ်းထားသည့်အပေါ် အက်ဒရာ (ADRA) အနေဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေစဉ်ကာလအတွင်း အဆိုပြုလွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ မည် သည့်အချိန်တွင်မဆို မိမိတို့၏ စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) ကို ပြင်ဆင်ချက် အနေဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးသားနိုင်သည်။ တင်သွင်းလာသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးထံမှ စီမံချက် အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားရာတွင် နဂိုတင်သွင်း ထားသော စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) ထဲသို့သာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွတ် ရေးသားသွားရန် အသိပေးအကြောင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုလုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ချက်အားလုံးကို ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (Calling For Proposal – CFP) ပြင်ဆင်ချက်အရ အကြောင်းအရာ အချက် အ လက်စာရင်းကို အဆိုပြုလွှာတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းရသည့်အချိန် အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံ မှုရှိပါက အက်ဒရာ (ADRA) အနေဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ရမည့်ပိတ်ရက်ကို သီးခြားတိုးချဲ့ပေးသွား မည် ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာများ/ အဆိုပြုလွှာများကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ရေးသားတင်သွားရမည်။ ပူးတွဲပါ လျှောက် လွှာ ပုံစံ နှင့် ရ/သုံးမှန်းခြေ ဘတ်ဂျက်ဇယားဖောင်ပုံစံကို ယခုဖော်ပြပါ လင့်သို့  https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7E-w9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing ၀င်ရောက်ကြည့်ရူပြီး download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
ပြည့်စုံစွာရေးသား ထားသော အဆိုပြုလွှာ/လျှောက်လွှာများကို CSO–selection@adrathailand.org သို့ တိုက်ရိုက်လိပ်မူပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၂) ရက် ထက် နောက်မကျစေပဲ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါ
အဆိုပြုလွှာ ရွေးချယ်စိစစ်ခံရသည့်အဖွဲ့ အား အသိပေးကြေညာပေးမည့် အချိန် ။ ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၁) ၇က်။
စီမံကိန်း စတင်မည့် အချိန်ကာလ နှင့် ပြီးဆုံးမည့်ကာလ ။ ။၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၂၀) ရက်နေ့ မှ
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ အထိ။
The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Thailand office and Human Right and Development Foundation (HRDF) are implementingaproject entitled “CSO Development for the Promotion and Advancement of Migrant Rights”. This project isa36 month project funded by the European Union. The specific objective of the project is to strengthen capacity of local CSOs to effectively advocate for improvements in labour/human rights and working conditions for vulnerable migrant workers in greater Mae Sot, Thailand.
The project plans to engage three Civil Society Organizations (CSOs) and Community Based Organizations (CBOs) to implement various activities that contribute to the following results:
Improved awareness of and adherence to labour laws among target employers and migrant workers;
Enhanced CSO capacity to engage in policy dialogue platforms and networks for migrant rights and advocacy and;
Strengthened collaboration between CSOs, local authorities, and private sector to bring about improved labour/human rights for migrant workers.
ADRA and HRDF now invite proposals from CSOs and CBOs who meet the requirements of this Call for Proposal.
Types of entity eligible to receive sub–grants:
CSO/CBOs either registered or unregistered focused on legal aid or/and youth engagement, or/and health and hygiene promotion;
Service delivery history and potential, organizations already providing support to migrant community;
CSO/CBOs have operational locations in greater Mae Sot area;
Financial management system and procedure in place to ensure transparency, accountability, and cost-effectiveness;
Assessment on the ability to return funds to ADRA or HRDF if the partner fails to justify the cost with sufficient explanation and documentary evidence;
Openness to technical support.
Criteria for CSOs/CBOs selection:
Submit applications to the specified address before the deadline.
Convergence between the objectives of the project and, that of the partner CSOs and their experiences of carrying out proposed activities, will be an important factor in the selection of the CSO partners;
CSO/CBO that is able to prepare applications following the guidelines of the Call for Proposal that are advertised in the Thai NGO website;
CSO/CBO which has ever received financial support from international donors (e.g. international governmental organizations, UN agencies, international NGOs) and are familiar with the project and financial management system of international donors will be one of the factors for consideration but is not compulsory criteria;
Demonstrated effort in promoting gender equality at the organizational or community level will be one of the factors for consideration but is not compulsory criteria;
Details on Targets and Proposed Activities:
Sub–granting Partner One: Provide Legal Consultation to Migrant Workers (contributed to Result 1)
Number of Sub–granting Partner to be selected: 1
Sub–granting Amount: 50,000 EUR
Beneficiary Target: 1,000 migrant workers (50% women) received legal aid.
Proposed activities: i) Provide legal assistance, counseling and facilitating migrant workers in representing their cases before Labour and Protection Office and concerned authorities; ii) Obtain technical support from special legal advisor for complicated legal cases; iii) Conduct outreach activities among migrant workers; iv) Provide direct financial assistance to migrant clients to cover some cost of transportation, printing, and translation, and etc.; v) Hireaconsultant to writeacase study; vi) Support and co-facilitate the integrated forums in collaboration with ADRA; vii) Provide support to case referral system; viii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.
Sub–granting Partner Two: Youth Empowerment (contributed to Result 2)
Sub–granting Amount: 40,000 EUR
Beneficiary Target: Identify and empower 8 ‘Youth Advocacy Champions’ to engage in migrant and social policy advocacy.
Proposed activities: i) Conduct surveys among migrant youth to assess their awareness of Thai labour and migrant legislation as well as the issues affecting them; ii) Organizeaworkshop on the development of youth empowerment strategy; iii) Organize Youth Empowerment Workshop to engage youth in activity design and implementation; iv) Produce Advocacy Tool Kit for youth to advocate on issues of migrant rights, gender, and youth participation in policy dialogue; v) Produce social media tools that inform the CSOs and Thai authorities about the challenges migrant youth face; vi) Organize one public event that focus on youth issues to raise awareness; vii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.
Sub–granting Partner Three: Health and Hygiene Promotion (Contributed to Result 3)
Beneficiary Target: Provide health and hygiene promotion to 3,500 migrant workers and basic safety equipment to 500 migrant workers.
Proposed activities: i) Organize outreach activities to educate migrant workers about the Occupational Safety and Health Act, issues on labour rights, policies and laws; ii) Train peer educators; iii) Developing and translation of manuals related to safety and hygiene; iv) Organize campaigns related to migrant health and hygiene empowerment; v) Procurement of basic safety equipment; vi) Organize workshops for “Through Her Eyes” activity and produce 1,000 booklets on migrant women’s life in Mae Sot; vii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.
Any requests for clarifications should be sent to CSO-selection@adrathailand.org not later than 29 March 2020.
ADRA will response to any request for clarification of the CFP documents that it receives by the due date not later than3April 2020. The responses will be posted at www.adrathailand.org without identifying source of inquiry.
At any time prior to the deadline for submission of proposals, ADRA may, for any reason, whether at its own initiative or in response toaclarification requested byaprospective applicant, modify the CFP documents by amendment. All prospective applicants that have received the CFP documents will be notified in writing of all amendments to the CFP documents. For open competitions, all amendments will also be posted on the advertised source.
In order to afford prospective proponents reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their proposals, ADRA may, at its discretion, extend the deadline for the submission of proposal.
Applications/Proposals should be written in English and the application form and budget template can be downloaded from https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7E-w9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing
Completed applications should be sent to CSO-selection@adrathailand.org not later than 22 April 2020.
Planned award date: 1 May 2020
Planned contract start and end date: 20 May 2020 – 30 September 2022